Ukuthandana kwe-Intanethi - ngaba bayathembisa?
Kwihlabathi lanamhlanje, unxibelelwano olungqalileyo luya kuba luyaziwayo kwaye luyaziwayo. Abanye abantu kwi-intanethi banabangane abangakumbi kunobomi boqobo. Kodwa nangona siphila kwi-intanethi rhoqo, ngaba siyakwazi ukuguqulela bonke ubudlelwane esinabo kwi-monitor ye-computer, ebuhlotsheni bokwenene nothando? Ngokuqhelekileyo, ukuthandana kwe-Intanethi kunamaphi na ithemba kwizinto eziqhelekileyo okanye ngaba ulwalamano olunjalo luphela xa ikhompyutha ikhutshiwe?
Kutheni konke kwaqala
Kunokwenzeka ukuba uqonde ukuba ulwalamano oluninzi kunye noqhagamshelwano lwakho luthembise, nangona imibandela yokuqala. Ukuba le ndoda yajika kuwe ngamazwi aqhelekileyo "Sawubona ubuhle. Kutheni ungabikho i-spitz? ", Emva koko unolwazi olunokuthi luhlelwe ngokukhuselekileyo njengokuba lungabonakali. Emva koko, abantu ababhalela imifanekiso yee-template, ewe kwanoma ubani olandelelanayo, ngelixa eqhuba iimpazamo ezimbi, akanalo ingqondo okanye imbali. Ukongezelela, bafuna unxibelelwano othakazelisayo nomphefumlo, kunye nalowo onokukwazi ukuzenza ngesondo kwixesha elizayo. Ngoko, ukuba abantu abancinci beza kuwe, kungcono ukuba ungaqali ukuyikopisha, kuba awunakufumana nto ngaphandle kwe-interlocutor engathandekiyo. Ngokomzekelo, abantu baxoxe ngeendaba kwiqela elithile ekudibene nabo, kwaye ke bathetha kakhulu kangangokuba olu nxi Kule meko, ulwalamano lwakho lunokulingana nolwenene, ngenxa yokuba awukhethanga omnye kwiifoto kunye nemimiselo. Ndandingena kwiindawo zamanzi kwaye ngelo xesha, njengoko kudla ngokubakho ebomini bokwenene.
Akukho mfihlelo abantu abaninzi abaziphatha ngayo kwi-intanethi ngokungafaniyo nobomi boqobo. Kwaye, abanye badlala, abanye bavule loo macala, ngenxa yezizathu ezithile abakwazi ukubonakalisa kweli hlabathi. Ngoko ukuthetha nomntu, ufanele uqaphele ukuba umntu wangempela unokungafani nakubonayo kunye nesigxininiso sesilathiso kunye nokucinga malunga nethemba lobudlelwane bokwenene ubomi, lungele izinto ezimangalisayo. Ziyakwazi ukumnandi, kungekhona.
Ukuze uqonde ukuba ubuhlobo bakho buyinyani, zama ukuthetha ngokubanzi nge-Skype okanye kwifowuni. Xa sithetha nge-intanethi, asinaso ixesha lokucinga ngalo. Ngoko ke, ukuba ngokubambisana abantu banokubhenkisisa into ethile, batshintshe, bafundise, beva ilizwi lomnye nomnye unako ukuvavanya ngokunyanisekileyo intsingiselo yokwenene yakho kunye nokuqonda oko unokulindela kuye. Kodwa awudingi ukubopha amaphupha akho kumfanekiso owenzayo ngokujonga kwiphepha edibeneyo. Ungalokothi ukhohlwe ukuba nangona xa sithetha ngokunyanisekileyo, asikwazi ngokukhawuleza ukuba uyintoni umntu. Kwaye i-poavartarkam, i-albhamu kunye nemimiselo yale nto kwaye nangakumbi kunjalo. Nangona ubalela njengengcali enkulu yengqondo, uhlalutyo lwakho lwengcaciso malunga nomntu aluyi kulungeleka ngokwaneleyo kwaye lugqibe ngokupheleleyo. Wonke umntu unamacandelo omfihlelo womphefumlo, iimfihlakalo kunye nokunye, ukunqoba okunyanisekileyo, nto afuna ukuyifaka kwisiboniso sikarhulumente. Ngoko ke, ukugqiba ithemba lokuthandana kwi-Intanethi, uthembeke kunye nawe kwaye ungenzi imifanekiso engamanga. Kuze ude ubone umntu ngokwakhe, ude ukhulume naye ubuncinane kwithuba elithile, kuya kuba nzima kuwe ukuba uqonde ukuba yintoni kanye kwaye kufuneka ukulindele ntoni kuyo.
Uza kudlala umdlalo
Mhlawumbi, kuyimfuneko ukuthetha ngokwahlukileyo ngothando kwimidlalo ye-intanethi. Ukuphila kwihlabathi elithe tye, ukudala nokupompa umlingiswa, siyazilana nabanye abadlali, banxibelelana, bancedane. Emva kwexesha, ukujonga umlingani kuqala ukubonakala ngathi lo ngumntu wangempela, esinobungane naye, esimthandayo. Imifanekiso emihle kunye nobuso obuhle bamaqhawe ethu bangela umphumo wobungqina. Ukongeza, kwimidlalo emininzi unokudala iintsapho kunye nabanye abalinganiswa. Kwaye kwenzeka ukuba abantu bawa thandane kwi-intanethi, batshintshe le miva ngo kwenene, baze badideke kakhulu. Ngelishwa, oku kusemvelo. Ungalokothi ukhohlwe ukuba umdlalo ngumdlalo. Ukuqala ukudlala, phantse bonke abantu bembatha iimaski. Ewe, kukho abanye abahlala befana kunye nobomi, kodwa baninzi kakhulu kubo. Ngokwenene, abadlali bayashintshwa ngokukhawuleza nje xa bechofoza "igalelo" kumdlalo we-intanethi. Abazive nje nje nge-spellcaster abayalela i-elemental yezinto ezine kwaye banokubulawa ngamagama athile. Hayi, baziva njengeziqhawe, amantombazana amantombazana ahlala ngqo kweli hlabathi. Kwaye xa kuthe kwinqanaba lomdlalo omnye umntu onobubele obonakalayo, ukuziphatha ngothando kunye nokuziphatha okuthembisayo akunakubonakalisa iimvakalelo zomntu ohleli phambi kweso. Hayi, yonke loo mvakalelo ivela kumlingiswa, lowo umntu oye waba nendima. Kwiimidlalo ze-intanethi, abantu abanjalo bazivumela ukuba bathandane, bathambekele ngothando, bathetha izinto ezintle, ngelixa babesemgangathweni bokuba banokubamba into yokudibana, batshatile okanye batshatile. Le ndlela iyaqondakala. Oku kungabikho kokunakekelwa kwintetho ethandekayo, okanye uhlobo oluthile lomoya nolungqinekayo, olubhekiselele ebomini, kodwa emdlalweni akuvumela ukuba unzima, ulahlekelwe ngokwenene. Ngoko ke, musa ukuthatha umdlalo ngokuzeleyo uze uthande iziqinisekiso. Cinga ngawe, luhlobo luni lothando onokuthetha ngalo, ukuba ungumfanekiso odwetshiwe. Nangona uqhubeka uxoxisana kungekuphela kwimidlalo, kodwa nakwi-Skype okanye udibanisa, uqhubeka uyibona njengengxenye yomdlalo, ihlabathi eliyingqungquthela elinalo lonke unamandla, ohlakaniphile, omhle, onolwazi olumangalisayo kunye nolwazi. Ukuze ungadangali, kufuneka uhlale ukhumbule oku kwaye ungakheli izilwanyana. Enyanisweni, njengoko kubonisa ukubonisa, abaninzi abantu abazaziyo, ezenzeka ngokubambisana ngokubambisana, bazisa ukudumala.
Kodwa ke, umntu akakwazi ukusho ngokuqinisekileyo ukuba abahlobo abaqhelanisiweyo abaqhelekanga abanalo ithemba. Ukuze nje ungabi nethemba elilukhuni, kufuneka ulungiselele intlanganiso ngokukhawuleza kunokwenzeka kwimpilo yangempela. Ukuba umntu wenqaba ezo ntla nganiso, ngoko akathandanga nxamnye nolonxibelelwano olunzulu okanye oluziphatha ngokungafaniyo kunobomi. Ngoko ke, ungesabi ukuthetha ngeentlanganiso zangempela. Ngokuqinisekileyo iimpendulo zemibuzo enjalo ziya kuba "iphepha le-litmus", eliza kugqiba ithemba lohlobo lolwalamano.
Indlela esilala ngayo nomntu othandekayo, yiyiphi intetho eshoyo
Indlela yokurekhoda umfana kwifowuni?
Indlela yokukholelwa othandweni
Indlela yokwenza umthandi wakho umyeni
Indlela yokusinda ukuhlukana kumntu?
3 zokupheka ezilula zokupheka
Ukwazi ukubopha okungenamikhono
Iingcebiso ezi-9 ezisebenzayo malunga nendlela yokubhala incwadi yekhava ukubuyela kwakhona
EFlorida - indawo yokutyelela phantsi kweenkwenkwezi kunye nesibhakabhaka esinemigca
Ingulube kunye nezigulane
Inkcenkceshwa emva kokuphuma kwezinyo
I-Broccoli ibhaka e-curds
Ndiminyaka eli-16 ubudala kwaye andisenaso isoka
I-Pizza eneengxama zeesada
Ukutshitshiswa kwintsana ekhulelweyo, indlela yokunceda?